Tahriibayaashii ugu badnaa oo Ciidamada Turkiga gacanta ku dhigeen | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Tahriibayaashii ugu badnaa oo Ciidamada Turkiga gacanta ku dhigeen
Tahriibayaashii ugu badnaa oo Ciidamada Turkiga gacanta ku dhigeen
Boliiska Turkiga ayaa qabtay in ka badan 300 muhaajiriin intii lagu jiray hawlgallo saddexda gobol ee Talaadadii, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka.
Degmadda Osmancik ee gobolka bartamaha Corum ee dalka Turkiga, ayaa Booliiska isku xireen 250 muhaajiriin, kuwaas oo ka cararay gaadiidka lagu kaxeeyay.
Boliiska wuxuu u sheegey darawalka gaariga inuu joojiyo. Darawalku wuxuu ka cararey baabuur wadida hal dhinac oo wadada weyn.
Dhinaca kale 250 tahriibayaal ah ayaa ah muwaadiniin u dhashay Georgia, Pakistan, Azerbaijan iyo Afgaanistaan, sida laga soo xigtay sarkaal ammaan oo maxalli ah, oo ka hadlay xaaladda aan la aqoonsan karin sababtoo ah xannibaadyada la xiriira warbaahinta.
Muhaajiriinta, oo ay ku jiraan in ka badan 50 caruur ah iyo 11 haween ah, ayaa isku dayey inay gaaraan Yurub, sida uu sheegay sarkaal. Waxaa ka mid ahaa haween uur leh, oo loo qaaday isbitaalka.
Gobolka bari ee Erzurum, ciidamada amniga ee Turkiga ayaa qabtay 36 tuhmane, oo si sharci darro ah uga soo galay dalka Iran.
Tiro ka mid ah tuhmanayaasha ayaa ahaa muwaadiniin Pakistan iyo Afqaanistaan ​​ah, sarkaal kale oo ammaan ah ayaa sidaas yidhi.
Hawlgallo kale oo ka dhacay gobolka waqooyi-galbeed ee Edirne, gandarmada ayaa qabsaday 30 muhaajiriin ah, oo ay ku jiraan Pakistani iyo muwaadiniin Siiriya ah, kuwaas oo isku dayay in ay gaaraan Giriigga meel yar.
Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa saxiixay heshiis qoxooti ah bishii March 2016, kaas oo looga gol leeyahay in uu niyad-jebiyo socdaalka aan caadiga ahayn ee Badda Aegean isaga oo qaadaya tallaabooyin adag oo ka dhan ah tahriibayaasha dadka iyo horumarinta shuruudaha ku dhawaad ​​saddex milyan oo qaxooti Suuriya ah oo Turkey ah.
Tan iyo markaas, tirada dadka qaxootiga ah waxay qabsadeen Badda Aegean ee u dhexeeya Turkiga iyo Giriigga ayaa hoos u dhacay boqolkiiba %85, sida uu qabo Xeebta Xeebta ee Turkiga.
Previous articleXildhibaano isbaheystay oo soo saaray bayaan ku saabsan xaaladda siyaasadda iyo amniga dalka
Next articleSomaliland oo ciidamo farabadan geysay Magaalada Laas-Caanood